गीत गाउँदागाउँदै गायिकाले आफ्नै कपडा खोल्न थालेपछि यस्तो हंगामा! – Khabartime
गीत गाउँदागाउँदै गायिकाले आफ्नै कपडा खोल्न थालेपछि यस्तो हंगामा!
१० फाल्गुन २०७४, बिहीबार १५:४९ 231 पटक हेरिएको
नेपालगञ्ज – कोहलपुर औद्योगिक व्यापार मेला तथा पर्यटन महोत्सवमा सरस्वती लामाको प्रस्तुतिले बबाल भएको छ।गीत प्रस्तुत गरिरहेका बेलामा उत्तेजित हुँदै लामाले कपडा खोल्न थालेपछि दर्शकदीर्घमा होहल्ला भएको हो। युवाहरु उफ्रिएर आसपासमा रहेकालाई धकेल्न थालेपछि गायिका लामाको हातबाट माइक खोसिएको थियो ।
लामाले एउटा गीत सकेर ‘काले दाई, काले दाई’ बोलको गीत गाउने क्रममा आफ्नो कपडा खोलेकी थिइन्। लामाको प्रस्तुतिले गर्दा युवाहरु अनियन्त्रित भएपछि मेला नै प्रभावित भएको थियो।
अपरान्ह चार बजेतिर लामाले गीत गाउन शुरु गरेकी थिइन्। दोस्रो गीत गाउदा नै बबाल भएपछि उनलाई प्रहरीले सुरक्षित स्थानमा लगेको थियो भने तीन जनालाई युवालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। अरुको खोजी भइरहेको जनाएको छ।
सरस्वती लामाको प्रस्तुती नराख्न प्रहरीले आयोजकलाई सुझाव दिएको थियो। प्रहरीको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै आयोजकले लामालाई बोलाएका थिए। युवाहरुमा उच्श्रृंखलता बढेपछि शनिबारको मेला पनि अन्तिममा खल्लो भयो। उद्घोषकले नै केहीबेर बोलेर कार्यक्रम समापन गरिएको थियो।
गायिकाको प्रस्तुतिले गर्दा मेला नै खल्लो भएपछि आयोजकका बीचमा पनि विवाद बढेको छ। भोलिका दिन कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा मूल समितिको आकस्मिक बैठक बस्ने तयारी गरेको छ। source:- news24time